Super Mario tụgharịrị afọ 36 taa, iji mee mmemme ebe a bụ ndepụta aha site na nke kacha mma ruo nke kacha njọ - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Super Mario tụgharịrị afọ 36 taa, iji mee mmemme a bụ ndepụta aha site na nke kacha mma ruo na nke kacha njọ
Super Mario tụgharịrị afọ 36 taa, iji mee mmemme a bụ ndepụta aha site na nke kacha mma ruo na nke kacha njọ
by Trey Hilburn III September 12, 2021 453 echiche
Ọ bụ m, Mario n'ezie. Nwa obere mmiri mmiri na -eme emume ncheta ọmụmụ 36 ya taa na Septemba 13. Nintendo n'ihu mustachio'd Mario anọwo nso kemgbe. N'ezie, iji mee ka anyị nwee mmetụta nke ịka nka. Shigeru Miyamoto bụ maestro dị n'azụ Mario na ihe okike ya na enweghị ya, ebe egwuregwu ga -adị?
Nintendo na nke mbụ Super Mario Bros. bụ ọnụ ụzọ egwuregwu maka ọgbọ niile nke ụmụaka na karịa. Ruo taa Mario ka na -erepụ mgbe ewepụtara aha ọhụrụ. N'ezie, ihe kpatara nke ahụ bụ egwuregwu ndị ahụ bụ n'ezie, ọ dị oke mma na ihe ọhụrụ. Anyị hụrụ obere nwa nwoke ahụ na uwe ya n'anya. Enweghị ya, amaghị m ma m gaara abụ onye egwuregwu n'onwe m.
Iji mee ememe anyị na -eme ndepụta nke Mario utu aha site na nke kacha mma ruo nke kacha njọ. Ndị a esiteghị n'ọkwa m dị elu na ọbere nke franchise. Saịtị na -enyocha ịntanetị wee chịkọta ndepụta rad a, wee chịkọta ndepụta dabere na aha ịntanetị kachasị amasị.
Agaghị m agha ụgha, ọtụtụ ọkwa ndị a dabara na nhọrọ nke m.
Ndepụta nke Mario utu aha kachasị amasị ndị kacha amasị na -aga dị ka nke a:
5 Super Mario Galaxy abụọ
6 Super Mario 3D World + Bowser's iwe
7 Super Mario World 2: Obodo Yoshi
8 Ọhụrụ Super Mario 3D ụwa
8 Super Mario Onye kere 2
9 Super Mario anwụ Tọsde
10 Super Mario Land 2: mkpụrụ ego ọla edo 6
10 Ọhụrụ Super Mario Bros.
12 Super Mario ala
12 Ọhụrụ Super Mario Bros. U
14 Super Mario Bros.: Ọnọdụ ndị furu efu
15 Ọhụrụ Super Mario Bros. 2
16 Ala Super Mario 3D
Kedu ka ndepụta a si atụnyere nhọrọ nke gị? Mee ka anyị mara na ngalaba nkọwa na echefula iche ka Mario nwee ọmarịcha ụbọchị ọmụmụ!
Isi mmalite: https://www.bestonlinecasinos.ca/blog/2021/09/02/the-highest-and-lowest-rated-games-from-best-selling-franchises/